Baro sida loo hagaajiyo shaaribadaada. Tabaha jarista shaarubaha | Ragga Stylish
Waxaan ku jirnaa fiditaankii ugu dambeeyay ee bisha Guuritaan, dhaqdhaqaaq aad horay u jirtay Waxaan hadlay dhowr toddobaad kahor iyo tan waxay taageertaa cilmi baarista kansarka ragga - xiniinyaha iyo qanjirka 'prostate' -. Guuritaan (Moustche + Nofeembar) waxay ku ururisaa lacag iyada oo loo marayo wada-hawlgalayaasheeda, the mo-bros, kuwaas oo bisha Noofambar oo dhan fasaxaya shaarib.
Anagoo ka faa'iideysaneyna ficilkan xiisaha leh iyo taageerada leh, iyo maadaama aan ku jirno wiiggii seddexaad ee bisha, waxaa habboon inaan eegno daryeelka shaaribkeenna. Qoraalkan waxaan ku siineynaa dhowr talooyin waxtar leh hagaaji oo ilaali si fiican.
Guriga maqas khaas ah iyo shanlo Tweezerman.
In shaarubaha la ilaaliyo waa lagama maarmaan, khaasatan markay dherer iyo caleen leedahay, jarjar ugu yaraan hal mar labadii toddobaadba mar. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa xoogaa maqas gaar ah, waligaa ha u isticmaalin maqas nooc kale ah sida maqasaska qalabka wax lagu qoro. Kahor intaadan bilaabin qiimaha, waa inaad ku qoy biyo badan oo diirran.
Waa aasaas ka hor inta aan la goyn, in yar timo leh shanlo ganaax leh, marwalba jihada koritaanka timaha. Markaad goyneyso, ka bilaw dusha sare ee bushimaha, adigoo goynaya dhammaan timaha xad-dhaafka ah, tani waxay u adeegi doontaa in la qeexo shaarubaha oo looga tago bushimaha oo aan timo lahayn. Marka xigta, waxaa la joogaa xilligii la muujin lahaa dhinacyada. Markaad dhamaysid, shaarib shaaribkaaga markale oo mar kale jar haddii loo baahdo oo waxaa jira timo siyaado ah.
Sidoo kale waa muhiim, gaar ahaan haddii adiga fiiri Shaaribka ama gadhka waa caadi, inaad ku maydho shaaribka ama gadhka alaab gaar ah. Taasi waxay la jirtaa daaweynta gaarka ah ee timaha wajiga. Mid ka mid ah shirkadaha takhasuska ugu fiican leh waa Ingiriiska gadhley, oo leh shaambooyo kala duwan, qaboojiyeyaal iyo daaweyn gaar ah sida toners gaar ah oo loogu talagalay daryeelka wajiga ragga.
Macluumaad dheeraad ah - Movember: sii kordhaya shaarubaha sabab wanaagsan
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Bartamaha bisha Movember, baro sida loo hagaajiyo loona daryeelo shaarubaha
15 dharka jiilaalka maalmaha qabow